विचार-ब्लग Archives - Saptakoshionline
कोरानाको डर ,लकडाउन र फर्कीएकाे खुशी
चिन्ता डर त्रास मन भरि यसरी बढेको छ कि लाग्छ भोलिको दिनमा के हुन्छ कसैलाई थाहा छैन । मृत्य संग नडराउने आफलाई मै हु भन्नेहरु पनि घर भित्रै थुनिएका छन् । हाउगुजी भन्दा डराउने केटाकेटीहरु आजकाल कोराना आउंछ भन्दा अझ डराउने भएका छन । शाैचालय गएपछि र खानाखान अघि र खानाखाए पछि मात्र हातधुने म जस्ता धेरै अल्छिहरु अहिले कम्तिमा पनि हरेक घण्टामा हात मिचिमिचि धोइरहेका छन् । एम्वुलेन्सको साइरन बजेको बजेकै छ प...
इटालीबाट नेपालीको चिट्ठी – लकडाउनका बेला हेल्चेक्य्राईं नगर्नुहोला
'भेनिस कार्निभल' चलिरहेको थियो। इटालीको प्रमुख पर्यटकीय शहर भेनिसमा पर्यटकहरूको चहलपहल बढ्दै थियो। चीनमा कोरोनाको संक्रमण बढेको कुरा सुनिरहेका थियौँ। चिनियाँ पर्यटकबाट यता पनि आउनसक्छ भन्ने आंकलन भइरहेको थियो। ईटलीका अरू धेरै स्थानीयले पनि त्यस्तै सोच्थे। चिनियाँको जस्तो अनुहार देख्दा अर्कै नजरले हेर्थे। वर्षौंदेखि यतै बसेर व्यवसाय गरेका चिनियाँहरूलाई पनि हेर्ने नजर अर्कै भयो। शुरूमा संक्रमित भेटि...
“तपाईंले क्यान्सरलाई जित्नै पर्छ सर”
माघको अन्तिम साता तिर काम विशेषले कमल सरलाई भेट्न मकालु टेलिभिजन गएको थिएँ, सर ज्वरो आएर अफिसमा नगइ घरमै बस्नु भएको रहेछ । त्यसपछि मीत्र रोहित जी र म घरमै गयौं । त्यस्तै १० मिनेट जति गफगाफ गरेर काम सकेर विदा भएका थियौं । सरसँग भेट भएको ५,७ दिनपछि नै सरलाई ब्लड क्यान्सर भएको खबर थाहा पाउँदा त्यतिबेला म अवाक भएँ । सरको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नु बाहेक न बोल्ने नत लेख्ने कुनै शब्दै भेटिन । भर्ख...
नेपालले आत्मनिर्णयको अधिकार गुमाउनु कोरोनाभन्दा खतरनाक रोग हो – सुरेश आचार्य
कोरोना भाइरसको प्रारम्भिक सूचना संगै काठमाडौ आउने अन्तरराष्ट्रिय यात्रामा अनुगमन र चीनसंगको हवाई उडानमा रोक लगाएको भए यत्रो विवाद हुने थिएन । हामीकहाॅ विदेशी देश, व्यक्ति र संस्थाले नेपाल कोरोनाको उच्च जोखिममा छ भने पछि मात्रै सरकारी एजेन्सी तात्नुले वर्तमान परिस्थिति आएको हो ! दोष मिडियाको होइन, मास्क लगाउने जनताको पनि होइन, दोषी चाहि जनस्वास्थ्यप्रति निरपेक्ष ...
नम्र बन्दैमा कोही सानो हुँदैन– अब्राहम लिंकन
अब्राहम लिंकन आफ्नो साथीको गाडीबाट साथीसँगै कतै गइरहेका थिए । आफ्नो सुरमा हिडिरहेका अब्राहमलाई बाटोमा भेटिएका एक मजदुरले झुकेर प्रणाम गरे । मजदुरको जवाफमा लिंकनले पनि उसैगरी झुकेर मजदुरलाई प्रणाम गरे । यो देखेर साथीले लिंकन लाई सोधे– तपाइले त्यो सामान्य मजदूरलाई पनि यति साह्रो झुकेर किन प्रणाम गर्नुभएको ? साथीको प्रश्न पछि अब्राहम लिंकनले जवाफ दिए – महोयद म चाहन्न कि नम्रतामा कोही म भन्दा अगाडि जा...
१. कमजोर मानिसले बदला लिन्छ, बलियो मानिसले माफी दिन्छ, बुद्धिमान मानिसले भुलिदिन्छ । – अल्बर्ट आइन्स्टाइन २. जिन्दगि छोटो छ यसैले नियममा बाधिएर नबस । माफ गर्न समय नलगाउ, न्यानो अंकमाल गर । साचो प्रेम गर । खुलेर हास अनि जसले तिम्रो मुस्कान छिनेर लान्छ त्यसप्रति कुनै पछुतो नगर । – मार्क ट्वेन ३. घृणाले भरिएको यो संसारमा आशाले भर्ने हिम्मत गर । रिसाले भरिएको संसारमा आनन्दले भर्ने हिम्मत गर । निराशा...
स्वास्थानीको किताव च्यात्नेलाई रन्जु प्याकुरेल को खुल्ला पत्र
माननीय यसोदा सुवेदी ज्यु मिति २०७६/१०/२८ गते संसदमा तपाइँको प्रस्तुती हेर्ने मौका मिल्यो। कतिपय परंपरा गलत लाग्छन ,जो समाज र मानवीय हितकालागी उपयुक्त छैनन।त्यस्ता अन्धबिश्वासहरुलाइ तोड्दै जानू पर्छ।तर कसरी ? भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ। हज्जारौं मान्छे मार्ने काममा खटिएकी ,बर्सौँदेखी राजनिती गर्दै आएकि,पश्चिम् तिरैकी चेली अझ भनुँ प्रभावशाली कम्युनिस्ट नेता देव गुरुङकी श्रीमती जस्ती ब्याक्तित्वले अझै ...
सरकार के बासुरी बजाएरै समस्याको समाधान हुन्छ त ?
एक्कासी दैनिक उपभोग्य सामानको मूल्य बेला बेलामा आकासिनु रहस्यमय बजेको छ । आज बेलुका एउटा भाउमा किनेको सामान भोलिपल्ट उठ्दा कति पुग्छ अत्तो पत्तो हुदैन । हो यतिवेल यहि भएको छ बजारमा । प्याजको मूल्य वृद्धिको मारमा परेका उपभोक्ता मूल्य घट्न नपाउँदै लसुन र बोइलर कुखुराको मासुको मूल्य बढेपछि झन मारमा परेका छन् । बोइलर कुखुराको मासु, लसुन लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मुल्य उच्च रुपमा बढेको छ । २५ दिन अघि...
प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा पत्रकारिता गर्न थालेको झण्डै अढाई दसक भैसकेछ । मेरो पत्रकारिता वि.स. २०५० साल पछिबाट सुरु भएको हो । सुरुका केही वर्ष सिकाईकै क्रममा विते । त्यसपछि तेह्रथुमबाट प्रकाशिन हुने ‘खोजतलास साप्ताहिक’, ‘ताप्लेजुङ साप्ताहिक’, पछि आफैले सम्पादन गरेको ‘अन्तरदृष्टि’ साप्ताहिक, र काठकाडौबाट प्रकासन हुने ‘स्पेसटाईम, र ‘नेपाल समाचार पत्र’ हुँदै पूर्वका ‘मकालु टेलिभिजन’ तथा ‘संयन्त्र मिड...
तपाईंको जीवन मूल्यवान बनाउने वा मूल्यहिन ? नितान्त तपाईंको हातको कुरा हो । जीवन त यसैपनि मूल्यावान् छ । तर, हामीले यसको मूल्य गुमाउने गर्छौं । जीवनलाई बुझ्दैनौं । हामीले आफ्नो जीवनको मूल्य कसरी तय गर्ने ? यस सन्दर्भमा एउटा कथा छ । एक व्यक्तिले भगवान बुद्धसँग सोधे, ‘जीवनको मूल्य के हो ?’ बुद्धले तत्काल जवाफ दिएनन् । बरु एउटा काम लगाए । उनले ति व्यक्तिको हातमा एउटा ढुंगा थमाइदिए र भने, ‘जाउँ, यस ...